မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးနညျးပွဆိုးလျရှားကတော့ ရလဒျဆိုးတှကွေောငျ့ ဖိအားမြားနခြေိနျမှာ ပေါကျကရတှလေုပျဖို့စဉျးစားနပွေီး
အခု တောငျပံတိုကျစဈကစားသမားဆနျခြိုကို သူတဈခါမှမကစားဖူးတဲ့ ညာခွမျး Wing Back အဖွဈအသုံးပွုသှားဖို့ပွငျဆငျနပေါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီတုနျးက ဒေ့ါမှနျအသငျးကနေ ပေါငျ(၇၃)သနျးနဲ့ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျလူငယျတိုကျစဈကစားသမားဆနျခြိုဟာ
ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ ပုံမှနျကစားခှငျ့၊ ပုံမှနျခွစှေမျးပွသနိုငျဖို့ရုနျးကနျနရေပွီး အခုလညျး နရောပွောငျးလဲကစားရမယျ့အနအေထားနဲ့ရငျဆိုငျနရေပါပွီ။
ဆနျခြိုဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံမှာ(၁၃)ပှဲသာကစားခဲ့ရပွီး မိနဈပေါငျး(၅၆၄)မိနဈသာကစားခှငျ့ရခဲ့သလို ဝကျဈဟမျးအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ လိဂျဖလားပှဲမှာသာ ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈပါဝငျခှငျ့ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဆနျခြိုအနနေဲ့ တိုကျစဈအတှကျအခှငျ့အရေးဖနျတီးနိုငျမှု အားနညျးပမေယျ့ ခံစဈကို လိုကျပါကစားတဲ့နရောမှာ ကောငျးမှနျပွီး
ပွီးခဲ့တဲ့မနျစီးတီးနဲ့ပှဲတုနျးက ခံစဈအထိဆငျးကူခဲ့တာကွောငျ့ ဆိုးလျရှားက သူ့ကို Wing Back အဖွဈအသုံးပွုဖို့ဆန်ဒရှိနတောပါ။
ဆိုးလျရှားက အခုနောကျပိုငျး (၃-၄-၁-၂)ကစားကှကျကို အသုံးပွုနပွေီး ညာခွမျးက ဘဈဆာကာဟာ Wing Back အဖွဈကစားတာမှာ အားနညျးခကျြတှရှေိနတောကွောငျ့ ဆနျခြိုကို ဘဈဆာကာရဲ့နရောမှာ စမျးသပျကစားစဖေို့ပွငျဆငျနတောဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဆိုးလျရှားရဲ့အစီအစဉျအပျေါ ယူနိုကျတကျပရိသတျတခြို့ကတော့ သဘောမတူကွဘဲ ဆနျခြိုလို တိုကျစဈကစားသမားတဈဦးကို နောကျတနျးမှာအသုံးပွုတာက မဖွဈသငျ့ဘူးလို့ဝဖေနျနကွေပါတယျ။
ယူနိုကျတကျပရိသတျတဈဦးက “ဆနျခြိုကို ညာခွမျး Wing Back မှာ ကစားခိုငျးမယျ??
ဘယျလောကျမြားေ-ာကျသုံးမကလြိုကျတဲ့အတှေးအချေါလဲကှာ . ..
ဆနျခြိုကိုချေါဖို့ (၃)နှဈလောကျအခြိနျပေးပွီးတော့ အခု အရနျခုံပို့ထားတာနဲ့တငျအားမရဘဲ သူ့ကစားသမားဘဝမှာ တဈခါမှမကစားဖူးတဲ့နရောမှာ သုံးဖို့လုပျနပွေနျပွီ။
ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေ အသငျးပိုငျရှငျတှကေို အပွဈတငျနကွေပမေယျ့ တကယျတနျးက နညျးပွရဲ့အသုံးမကမြှုနဲ့အမြားကွီးဆိုငျပါတယျ”လို့ ဝဖေနျရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဆန်ချိုကို ထူးထူးခြားခြားနေရာမှာပြောင်းလဲကစားခိုင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြဆိုးလ်ရှားကတော့ ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့် ဖိအားများနေချိန်မှာ ပေါက်ကရတွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီး အခု တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားဆန်ချိုကို သူတစ်ခါမှမကစားဖူးတဲ့ ညာခြမ်း Wing Back အဖြစ်အသုံးပြုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက ဒေ့ါမွန်အသင်းကနေ ပေါင်(၇၃)သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမားဆန်ချိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ပုံမှန်ကစားခွင့်၊ ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရပြီး အခုလည်း နေရာပြောင်းလဲကစားရမယ့်အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
ဆန်ချိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံမှာ(၁၃)ပွဲသာကစားခဲ့ရပြီး မိနစ်ပေါင်း(၅၆၄)မိနစ်သာကစားခွင့်ရခဲ့သလို ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ လိဂ်ဖလားပွဲမှာသာ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ချိုအနေနဲ့ တိုက်စစ်အတွက်အခွင့်အရေးဖန်တီးနိုင်မှု အားနည်းပေမယ့် ခံစစ်ကို လိုက်ပါကစားတဲ့နေရာမှာ ကောင်းမွန်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့မန်စီးတီးနဲ့ပွဲတုန်းက ခံစစ်အထိဆင်းကူခဲ့တာကြောင့် ဆိုးလ်ရှားက သူ့ကို Wing Back အဖြစ်အသုံးပြုဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။
ဆိုးလ်ရှားက အခုနောက်ပိုင်း (၃-၄-၁-၂)ကစားကွက်ကို အသုံးပြုနေပြီး ညာခြမ်းက ဘစ်ဆာကာဟာ Wing Back အဖြစ်ကစားတာမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေတာကြောင့် ဆန်ချိုကို ဘစ်ဆာကာရဲ့နေရာမှာ စမ်းသပ်ကစားစေဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့အစီအစဉ်အပေါ် ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တချို့ကတော့ သဘောမတူကြဘဲ ဆန်ချိုလို တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးကို နောက်တန်းမှာအသုံးပြုတာက မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တစ်ဦးက “ဆန်ချိုကို ညာခြမ်း Wing Back မှာ ကစားခိုင်းမယ်??ဘယ်လောက်များေ-ာက်သုံးမကျလိုက်တဲ့အတွေးအခေါ်လဲကွာ . .ဆန်ချိုကိုခေါ်ဖို့ (၃)နှစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ အခု အရန်ခုံပို့ထားတာနဲ့တင်အားမရဘဲ သူ့ကစားသမားဘဝမှာ တစ်ခါမှမကစားဖူးတဲ့နေရာမှာ သုံးဖို့လုပ်နေပြန်ပြီ။
ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေပဲ။ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေက အသင်းပိုင်ရှင်တွေကို အပြစ်တင်နေကြပေမယ့် တကယ်တန်းက နည်းပြရဲ့အသုံးမကျမှုနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်”လို့ ဝေဖန်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။